Walquunnamawwan Uno baay'een walquunnama dhaggeeffataa addaa irratti dhaggeeffataa akka galmeessituuf si fayyada. Kunimmoo akka ati mudata addaa dhaggeeffattuu fi tooftaa dhaggeeffataa sirrii akka waamtu siif eeyyama. Faankishiniin CreateUnoListener walquunnama dhaggeeffataa waamame eegeeti wanta walquunnamni kun deeggaru gara walquunnamaatti dabarsa. Wanti kun kana booda dhaggeeffataa galmeessuuf gara tooftaatti ni darba.
Fakkeenyi armaan gadii mankitaaba wantaa isa bu'uraa irratti hundaa'a.
Tooftaan CreateUnoListener ulaagaalee lama barbaada. Inni jalqabaa huddeelsoo dhaa fi kunis bal'inaan kan jalatti ibsame dha. ulaagaan inni lammaffaan maqaa gahaa walquunnama dhaggeeffataa kan itti fayyadamuu barbaaddu dha.
Dhaggeffataan gara tamsaasa wantaatti dirqama ida'amuu qaba.Kuni kan godhamu tooftaa sirrii kan dhaggeeffataa ida'u waamuudhaani. Tooftaan kun yeroo mara sirna "addFooListener" hordofa, "Foo" n akaakuu walquunnama dhaggeeffataa, 'X' malee dha. Fakkeenya kana keessatti, tooftaan addContainerListener 'iin XContainerListener galmeessuuf ni waamama:
oLib = BasicLibraries.Library1 ' Mankitaabaa jiraachuu qaba!
oLib.addContainerListener( oListener ) ' Dhaggeeffataa galmeessi
Dhaggeeffataan galmaa'eera. Yommuu mudatni dhalate, dhaggeeffataa walgitaan tooftaa sirrii walquunnama com.sun.star.container.XContainerListener irraa ni waama.
Huddeelsoon Dhaggeeffattoota galmaa'an Basic-subroutines irraa waama. Sirni bu'uraa sa'aa-darbee Basic-subroutines yookiin faankishinoota maqaa "PrefixListenerMethode" qaban barbaaduu fi yommuu isaan argaman waamuu dha, gama biraatiin dogoggorri sa'aa-darbee ni dhalata.
Fakkeenya kana keessatti, Walquunnama-Dhaggeeffataa tooftaalee armaan gadiitti fayyadama:
Listener base interface (com.sun.star.lang.XEventListener): hundee walquunnamaa walquunnamtiiwwan dhaggeeffataa maraaf
Tooftaa walquunama com.sun.star.container.XContainerListener
Fakkeenya kana keessatti, huddeelsoon ContListener_ dha. Kanaafuu, oliin adeemsaa dirqama Basic keessatti raawwatamuu qabu:
Akaakuun caasaa mudataa kan odeeffannoo waa'ee mudataa of keessaa qabu akaakuu dhaggeeffataa kamiifuu ni jiraata. yommuu tooftaa dhaggeeffataan yaamame, gatiin mudata kanaa gara tooftaatti akka ulaagaatti darba.Haga ulaagaa sirriin beeksisa Sub keessa darbetti, bu'urri tooftaa dhaggeeffataa mudata wantootaas waamuu ni danda'a. Fakkeenyaaf:
Wanta hin tajaajille yoo ta'e ulaagaa mudata wantaa itti dabaluun si hin barbaachisu:
' Raawwii yoo xiqqaate xinnoo gatu
Dogoggorawwan Bu'uuraa sa'aa-darbee dhabamsiisuuf tooftaan dhaggeeffataa yeroo mara dirqama raawwachuu qaba.